दैलेख जिल्लाको ठाँटीकाँध गाउँपालिका वडा नं. ४ गैरागाउँमा भदौ २ गते राति ठूलो पहिरो गयो । उक्त पहिरोमा परी सात घर पुरिए भने दुई जनाको ज्यान गयो । जनक कठायत र लोकेश कठायतले ज्यान गुमाएको पहिरोमा बम नेपाली, टीका कठायत र शमशेर कठायत घाइते भए ।
तीमध्ये नेपालीको अहिले पनि देउती अस्पताल वीरेन्द्रनगरमा उपचार जारी छ । उक्त वडाको ज्यामीचौर, धामीचौर, गैरागाउँ पूरै पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ ।
पहिरोले ९० घरका नागरिक विस्थापित भएका छन् । उनीहरू सबै गाउँको डाँडामा पालमुनि पुगेका छन् । गाउँका ८१ घर पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन् ।
‘एक सानो घडेरी खरिद गरेर गाउँमा घर बनाई बस्दै आइरहेको थिएँ । त्यो घरसहित मेरा सबै सपना पहिरोले पुर्‍यो । भारततिर काम गर्न जान सकिने अवस्था छैन । गाउँमा खाना खानका लागि बारी पनि छैन । अब कसरी मैले जहानबच्चा पाल्ने होला ?’ पहिरोले घर पूर्ण क्षति भएका स्थानीय बल नेपालीले लोकान्तरसँग भने, ‘संघ–संस्थाले पाल दिएका छन्, थोरै भाँडाकुँडा पनि दिएका छन्, त्यतिले जीन्दगी कसरी चलाउन सकौंला ?’
भारतमा गरेको रोजगारीमा कमाएको पैसाले जेडेको घडेरी र घर पहिरोले ध्वस्त बनाइदिएको छ ।
‘न घर रह्यो न त बारी नै छ,’ लोकान्तरसँग उनले गुनासो गरे, ‘जिन्दगीबाट नै दिक्क लाग्न थाल्यो, न घरमा जम्मा गरेको दुईचार पैसा जोगाउन सकियो, न त भाँडा कुँडा नै । अहिलेसम्म कमाएको सबै कुरा पहिरोले लग्यो ।’
मन विश्वकर्माको पनि यस्तै गुनासो छ । अहिले वडा कार्यालय, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय र प्रदेश सभा सभामुखको पहलमा केही राहत सामग्री आएको भएपनि त्यो पर्याप्त छैन ।
भएको बारीमा पहिरो पसेको छ । मकै राम्रो फल्ला भन्ने थियो, मकैबारी बगरमा परिणत भएको छ ।
‘हामीले खाने मुख्य अन्नबाली मकै थियो, अब कसरी बालबच्चालाई पेट भरिउञ्जेल खाना खुवाउनु ? उनले दुखेसो पोखे, ‘सरकारले कम्तिमा हामीलाई थप राहत, बसोवासको व्यवस्था गरिदिएको भए हुन्थ्यो ।’
यी प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्र हुन । अहिले त्यहाँ लगाइएको धानबाली, मकै बाली सखाप भएको छ ।
पाक्नै थालेको मकै पहिरोले लगेको छ । वैशाखसम्म खान पुग्ने अन्न पहिरोले पुर्दा गाउँ नै शोकमा छ । करोडौंको क्षति गाउँले बेहोरेको वडा अध्यक्ष रमेश सिजापतिले बताए ।
कसले कति दिए राहत ?
कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुख राजबहादुर शाही केही दिनअघि पहिरोपीडित बस्तीमा पुगेर फर्किए ।
वडाध्यक्ष सिजापतिका अनुसार सभामुखले राहत भनेर १८० बोरा चामल, ९० वटा कम्बल, ९० झुल, ९० म्याट र ६ ओटा त्रिपाल गाउँमै पुगेर हस्तान्तरण गरेका छन् ।
यस्तै, रेडक्रस दैलेख, एभरेष्ट क्लब दैलेख, कर्णाली समाज दक्षिण कोरियाले पनि पहिरो पीडितका लागि चामल, दाल, नुनतेल वितरण गरेका छन् ।
ठाँटीकाँध गाउँपालिकाले पनि खाद्यान्नको जोहो गरिरहेको छ । गाउँमा कार्यदल गठन गरी उनीहरूको बसाई व्यवस्थापनका लागि खाता सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
खातामा हालसम्म ३५ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको वडाध्यक्ष सिजापतिले जानकारी दिए ।
जलविद्युत्को नामोनिसान मेटियो
गाउँमा रहेको खोलाबाट जलविद्युत् निकाल्ने तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको थियो । देउती लघु जलविद्युत् आयोजनाको नामोनिसान पहिरोले मेटाइदिएको छ ।
यतिसम्मकि आधामात्रै पाइपलाइन बाँकी रहेको छ । जेनरेटर र पावर हाउसको अत्तोपत्तो छैन ।
ज्यामीचौरमा रहेको विद्यालयको पाँच कोठे भवन पनि पहिरोले पूर्णरूपमा पुरेको छ । गाउँमा रहेका ३० वटा खानेपानी तथा सिँचाई आयोजनालाई पहिरोले बगाएको छ ।
अध्यक्ष बडुवाल भन्छन्, ‘हाम्रो करोडौंको क्षति भइसकेको छ । पहिरोका कारण विस्थापित नागरिकलाई कहाँ राख्ने भन्ने समस्या भएको छ, सरकारले एकीकृत बस्ती बसालेको भए यो समस्याबाट मुक्ति हुन्थ्यो कि ?’
नयाँ बसपार्कमा गाडीको खिया कोट्याउँदै सहचालक, डिज...
कोरोना संकटले गोजी रित्तिएपछि अपराध र आत्महत्याको ...
मापदण्डविनै गरिएको काज सरुवाविरुद्ध कर्मचारी, आर्थि...
अनलाइन पढ्न कहाँ ल्यापटप, कताको इन्टरनेट ! महामारी...
सुदूरपश्चिममा २४ घण्टामा थपिए ९८ संक्रमित